Akọsala ihe a na-achọghị ka ndị ọzọ nụ (9)
Okwu e kwuru n’oge kwesịrị ekwesị (11)
Agala n’ụlọ mmadụ mgbe niile (17)
Kpokwasị icheku ọkụ n’isi onye iro gị (21, 22)
Akụkọ ọma dị ka mmiri jụrụ oyi (25)
25 Ilu ndị a sokwa n’ilu Solomọn tụrụ.+ Ọ bụ ndị na-ejere Hezekaya+ eze Juda ozi dere ha: 2 A na-eto Chineke n’ihi ihe ọ ma ndị mmadụ na-amaghị.+ A na-akwanyekwara ndị eze ùgwù maka na ha na-esi imi n’ala achọpụta ihe. 3 Otú ahụ eluigwe si dị elu, ụwa emiekwa emie,Ka a na-enweghịkwa ike ịchọpụta ihe dị ndị eze n’obi. 4 Nụchaa ọlaọcha ma wepụsịa irighiri ihe na-adịghị mma na ya,Ọlaọcha ahụ ga-aghọ ezigbo ọlaọcha.+ 5 Chụpụ onye ajọ omume n’ihu eze,Ezi omume ga-eme ka ọchịchị* eze kwụsie ike.+ 6 Ebulila onwe gị elu n’ihu eze,+Agakwala nọrọ n’ebe ndị ukwu nọ,+ 7 N’ihi na ọ ka mma na ọ sịrị gị: “Gbagote ebe a,”Kama imechu gị ihu n’ihu onye a ma ama.+ 8 Ya adịla gị ọsọ ọsọ ịgba onye agbata obi gị akwụkwọ. Gịnịzi ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na o menye gị ihere?+ 9 Rịọ onye agbata obi gị arịrịọ ka gị na ya kpezie,+Ma akọsala ihe a gwara gị nke a na-achọghị ka ndị ọzọ nụ,+ 10 Ka onye nụrụ ihe i kwuru wee ghara imenye gị ihere,Ya abụrụ na ị kọsaala akụkọ ọjọọ nke ị na-enweghịzi ike ime ka ndị ọzọ ghara ịnụ. 11 Otú apụl ndị e ji ọlaedo kpụọ si ama mma ma e tinye ha n’efere e ji ọlaọcha kpụọKa okwu e kwuru n’oge kwesịrị ekwesị si adị mma.+ 12 Otú ahụ e si eji ọla ntị e ji ọlaedo rụọ nakwa ihe e ji achọ mma e ji ezigbo ọlaedo rụọ akpọrọ iheKa onye na-anabata aka ná ntị onye ma ihe na-adọ ya na-eji onye ahụ na-adọ ya aka ná ntị akpọrọ ihe.+ 13 Otú ahụ snoo si eme ka ahụ́ jụọ mmadụ oyi n’oge okpomọkụ mgbe a na-ewe ihe ubiKa onye ozi a tụkwasịrị obi na-eme ka obi ruo ndị dunyere ya ozi ala,N’ihi na ọ na-eme ka obi dị nna ya ukwu mma.+ 14 Onye ji onyinye ọ na-enyebeghị enye na-etu ọnụDị ka ebe mmiri rujuru n’elu, ifufe efeekwa, ma mmiri ezoghị.+ 15 Ọ bụ ndidi ka e ji enweta obi onyeisi,Okwu ọma na-emekwa ka obi jụrụ mmadụ.*+ 16 Ị hụ mmanụ aṅụ, rachaa naanị nke ga-ezuru gị,N’ihi na ị rachaa ya gafee ókè, i nwere ike ịgbọ ya.+ 17 Adịla na-aga n’ụlọ onye agbata obi gị mgbe niile,Ka ihe gị ghara ịgbụ ya, ya akpọọ gị asị. 18 Onye na-agbagide onye agbata obi ya akaebeDị ka okpiri e ji alụ agha na mma agha nakwa akụ́ ọnụ ya pịrị apị.+ 19 Mmadụ ịtụkwasị onye a na-ekwesịghị ịtụkwasị obi* obi n’oge nsogbuDị ka ebe mmadụ ji ezé gbajiri agbaji na-ata ihe ma ọ bụ ebe mmadụ ji ụkwụ ya nke na-ama jijiji na-aga ije. 20 Onye na-abụrụ onye obi na-adịghị mma abụDị ka onye yipụrụ uwe ya n’ụbọchị oyi na-atụ,Ọ dịkwa ka ịwụsa mmanya gbara ụka n’elu akanwụ.*+ 21 Ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị,* nye ya nri ka o rie. Ọ bụrụ na mmiri na-agụ ya, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ,+ 22 N’ihi na i mee otú ahụ, ị na-ekpokwasị icheku ọkụ n’isi ya,*+Jehova ga-akwụkwa gị ụgwọ. 23 Ifufe nke si n’ebe ugwu na-eme ka nnukwu mmiri zoo,Ire onye na-agba asịrị na-akpasukwa mmadụ iwe.+ 24 Ọ ka mma na mmadụ gara biri n’otu akụkụ elu ụlọKama ya na nwaanyị na-esekarị okwu ibi n’otu ụlọ.+ 25 Akụkọ ọma nke si n’ala dị anyaDị ka mmiri jụrụ oyi nke na-eme ka onye* ike gwụrụ nweta ume.+ 26 Onye ezi omume nke kwere ka onye ajọ omume mebie yaDị ka isi iyi a gbarụrụ agbarụ na olulu mmiri e metọrọ emetọ. 27 Ịracha mmanụ aṅụ gafee ókè adịghị mma,+Mmadụ ịchọ ka a na-eto ya adịghịkwa mma.+ 28 Onye na-anaghị ejide onwe ya ma a kpasuo ya iweDị ka obodo a kwaturu mgbidi ya akwatu.+
^ Na Hibru, “Ire ọma na-agbajikwa ọkpụkpụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “onye aghụghọ.”
^ Akanwụ e kwuru okwu ya n’ebe a bụ ihe a na-egwute n’ala. E tinye ya ná mmanya gbara ụka, ọ na-eji ike gbọpụtasịa ụfụfụ.
^ Na Hibru, “onye kpọrọ gị asị.”
^ Ya bụ, ime ka obi onye ahụ jụrụ.
^ Na Hibru, “mkpụrụ obi.” Gụọ Nkọwa Okwu.